Nduzi mmepe nke onye ebu ya n ’odinihu.
Ebu bụ otu n'ime ndị isi ọrụ ngwaọrụ nke oge a ụlọ ọrụ, lọjistik ígwè na akụrụngwa, bụ ihe ndabere nke ezi uche nzukọ nke uka mmepụta na mechanized eruba usoro. Maka ụlọ ọrụ nke atọ nke lọjistik, ebu ebu ihe na teknụzụ ndabere maka ịhazi ...
1. Erughị erughị ala eriri erughị ala Ọ bụrụ na eriri enweghị ezu erughị ala, a ga-ezughị esemokwu na-akwọ ụgbọala ike n'etiti akwọ ụgbọala pole na eriri, na ọ gaghị enwe ike sere na eriri na ibu ije. The erughị ala ngwaọrụ nke eriri ebu na-agụnye ịghasa erughị ala, haịdrọlik ...
Mkpebi nke ọsọ dị ezigbo mkpa maka imepụta belt ebufe, nke metụtara ụda njem na ọnụ ahịa. Ba ọsọ ọsọ nke eriri ebu belt nwere ike melite ikike inyefe. N'okpuru otu ọnọdụ njem, enwere ike iji obere bandwit, yana l ...